Moa ve ianao Machiavellianism diso amin'ny famotsoran-keloka? - Mpanararaotra
Narcissism dia lohahevitra be mpiresaka indrindra eo amin'ny tontolon'ny fivoaran'ny tena manokana, saingy io karazana toetra io dia natolotra famelana betsaka kokoa noho izay mety ho mendrika azy.
Misy toetra isan-karazany izay matetika, diso, noho ny tsy fankasitrahana ary izay, raha ny marina, dia ekena ho anisan'ny karazan-toetra Machiavellian.
iza i James charles bf
Meloka noho ny nanaovany an'io ny tranokala ity - toy ny ataon'ny maro hafa - satria tsy fahita firy ny olona iray mampiseho toetra mampiavaka ny mpifoka rongony sy ny Machiavellian.
Fa tsy midika akory izany fa ny mpahay zava-mahadomelina rehetra dia Machiavellian na ny mifamadika amin'izany. Ny fahalalana ny fahasamihafana dia hamela anao hamantatra hoe iza no atrehinao.
Voalohany indrindra, andao jerena ireo toetra tena izy dia mifandray amin'ny mpifoka rongony.
Ny tsy fitoviana dia entin'ny ego ary tsotra izao ny mahita azy rehefa dinihinao ny sasany amin'ireo toetra mahazatra an'io olona io.
Manana fahitana manjavozavo momba ny fahamendrehana izy ireo, mino ny tenany ho manokana, ambony ary manana fiheverana mihoa-pampana ny zava-bitany sy ny fahaizany.
Mitady ny fifantohan-tsaina sy dera ary fiderana an'ireo manodidina azy izy ireo ary sosotra be rehefa tsy ho avy izany.
Raha sendra tsikera na fomba fijery tsy mifanaraka amin'ny azy izy ireo, dia miaro tena tanteraka ary mandroaka.
Manana kibo izy ireo fahatsapana ho mendrika , mino ny tenany ho mendrika kokoa noho ny olon-kafa.
Tena tia tena izy ireo ary tsy tia mahita ny hafa mahomby, na dia manao izany koa aza. Lavin'izy ireo ny mizara ny sain'ny hafa amin'ny olon-kafa.
Mandray ny fialonana sy ny fialonana amin'ny sehatra vaovao izy ireo. Manantena ny hiatrika ny hatezerany raha tokony hieritreritra izy ireo fa mametraka olon-kafa alohan'izy ireo - indrindra amin'ny fifandraisana.
Izy ireo dia hanambany na hanambany ny olon-kafa amim-pifaliana mba hahatonga azy ireo hahatsapa ho tsara - tsy mahatsapa fanenenana izy ireo amin'ny fananganana tsy fahasambarana amin'ny hafa.
Azon'izy ireo atao ny mampiseho fihetsiketsehana mibontsina be raha toa ka manome izay tadiavin'ny ego.
Ireo toetra etsy ambony ireo dia nifamatotra ara-drariny tamin'ny toetra narcissistic, fa ireo etsy ambany kosa dia ampahany amin'ny toetra Machiavellian.
Ny fiteny miafina ataon'ireo mpifoka rongony: ny fomba fanaovan-dry zareo manipy maso sy ny fanaintainany ireo tra-boina
Ahoana no ahitanao ny tsy fitovizan'ny tsy fitoviana sy ny fiheveran-tena ho avo
Ny zavatra iray izay saika resahina matetika ao amin'ny lahatsoratra momba ny tsy fankasitrahana dia ny finiavana hamitaka ny hafa, saingy io toetra io no tokony horesahina araky ny tokony ho izy ao anatin'ny tontolon'ny Machiavellianism.
Ny Machiavellians dia mametraka ny tombony ho an'ny tenany alohan'ny zavatra hafa rehetra ary noho io antony io no tadiavin'izy ireo mifehy sy mampiasa ny hafa hanararaotra azy ireo. Hitan'izy ireo ho toy ny vato fiakarana ny olona - ho toy ny fitaovana hatramin'ny farany - ary handeha am-pifaliana eo amboniny izy ireo mba hahatratrarana ny toerana tian'izy ireo.
Famantarana 20 an'ny narcissist mampidi-doza
Ho azy ireo, ny fandresena no tanjona faratampony, ary raha ny volan'ny sasany no mahavoa azy, dia avelao ihany. Tsy miahy afa-tsy ny zava-bitan'izy ireo manokana izy ireo, fa matetika dia tena misy ny zava-misy momba ireo.
Maniry harena sy fahefana mihoatra ny zavatra hafa rehetra izy ireo, ary ny tsy fetezan'izy ireo amin'ny fitondran-tena mahazatra no ahafahan'izy ireo manenjika ny tanjony ambony tsy misy nenina sy afaka amin'ny feon'ny fieritreretana.
Mampiasa tarehy hafa amin'ny toe-javatra samihafa izy ireo ho fitaovana hahazoana izay tadiaviny. Hampiasa lainga sy fitaka izy ireo raha ilaina izany, sady mahay manintona sy tia namana.
Hamoaka “fahamarinana” momba azy ireo izy ireo mba hananany fahatokisana ary hananana fahatsapana ho meloka hahatonga ny olona hanao ny baikony.
Maloto ny fanodikodinam-bolan'izy ireo - mitady hanatratra ny tanjony izy ireo nefa tsy manintona loatra ny toetra tsy dia ilaina loatra. Mety manana olom-pantatra maro izy ireo, saingy miady mafy amin'ny famoronana finamanana na fifandraisana matanjaka.
famantarana fa tsy ao aminao ny bandy
Amin'ny ankapobeny dia manisa sy mitandrina be izy ireo rehefa miresaka ny zavatra ataon'izy ireo. Ny zava-drehetra dia mila kasaina hatao ary tanterahina amin'ny fomba mazava mba hampitomboana ny fahafahan'izy ireo hahita fahombiazana.
Tsy matoky ny fahatsaran'olombelona izy ireo mahita azy ireo ho malemy sy malefaka miantehitra amin'ny hafa na inona na inona.
Araka ny voalaza tetsy aloha, dia tena mety ho an'ny olona iray ny manana toetra roa narcissistic sy Machiavellian. Izy ireo dia mety ho zavaboary tia vola mitady hanodikodina sy hamitaka ny hafa noho ny tombotsoany manokana.
Raha ny marina dia mety misy ambaratongam-pahatoniana a Machiavellian , mba hifantohana irery amin'ny fahombiazanao - na dia handany vola amin'ny hafa aza - dia mitaky fahazotoana miasa.
mifankatia amina lehilahy efa manambady
Saingy, na dia saro-piaro loatra aza ny mpifoka iray ka maniry fahombiazana ho an'ny olon-kafa, dia mety hisy fotoana mety hanaiky olon-kafa mahomby amin'ny toetra Machiavellianina raha toa ka afaka mampiakatra ny tohatra koa izy ireo. Vonona izy ireo hanao raharaham-barotra amin'ny olona mitovy tantana amin'ny fahombiazana raha toa ka mahazo harena sy fahefana bebe kokoa izy ireo.
Ny mpihinana zava-mahadomelina dia mety ho be fientanam-po kokoa, haingana ny hatezerana ary mora tezitra, fa ny Machiavellian kosa dia afaka mametraka elanelana kely eo anelanelan'ny fihetsik'izy ireo sy ny fihetsem-pony.
Ka misy tokoa ny fitoviana amin'ireo karazana toetra roa, saingy misy ihany koa ny tsy fitoviana mazava. Ny lafiny manodinkodina sy mifehy dia tena fampisehoana ny Machiavellianisme fa tsy ny faharatsian'ny olona maro. Azo atao ny manana mpitsabo nadiodio izay tsy mifehy loatra ary Machiavellian izay tsy tena manokana fitadiavana saina na delestazy.
Ny fahalalana ny fahasamihafana dia hahafahanao ho ampy fitaovana kokoa hiatrehana ny tsirairay amin'izy ireo.
Azonao atao ve ny mieritreritra olona iray izay manavakavaka na Machiavellian? Ary efa nifanena tamina olona mampiseho ireo toetra roa ireo ve ianao? Mametraha hevitra etsy ambany hizara ny zavatra niainanao.
famantarana tsy mila anao intsony izy
eddie guerrero antony mahatonga ny fahafatesana
rehefa mahatsapa ianao fa tsy manana namana
lazao amiko zavatra mahaliana momba ny mpamaky ranomandry anao
inona no dikan'ny lafiny fiainana